Fiadiana amin'ny "coronavirus" :: Homena tambin-karama manokana ireo mpiasan'ny fahasalamana • AoRaha
Fiadiana amin’ny « coronavirus » Homena tambin-karama manokana ireo mpiasan’ny fahasalamana
Hahazo fankasitrahana. Homen’ny fanjakana tambinkarama manokana ireo mpiasan’ny fahasalamana miandraikitra ny fitsaboana sy fisorohana ny fiparitahan’ny aretina “coronavirus”. Nosokajian’ny Filohan’ny Repoblika , Rajoelina Andry, ho miaramila miatrika ady mihitsy izy ireo satria hiantoka manontolo amin’ny fanafahana an’i Madagasikara ao anatin’ity areti-mandoza ity.
“Mila tohanana izy ireo ary omena haja”, hoy ny Filoha nandritra ny fandaharana manokana tamin’ireo haino aman-jery rehetra manerana ny Nosy.
Omaly alina no voatondro hahatongavan’ireo fitaovana fitiliana avy amin’ny Sampan-draharaha iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana (OMS) eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato. Ireo mpitsabo mpanampy no hisahana ny fanaovana fitiliana an’ireo olona manatanteraka fihibohana nandeha tamin’ireo sidina farany avy aty ivelany.
Nambaran’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, koa fa hetra mitentina 145 000 tapitrisa ariary no tsy hiditra ao anatin’ny kitapom-bolam-panjakana noho ny fandraisana an’ireo fepetra niarahana amin’ireo sehatra tsy miankina ireo. “Ho fitsinjovana an’ireo mpiasa mba tsy ho very asa no anton’izany”, hoy izy.
Raharaham-bahoaka Hanamora ny fikarakarana taratasim-panjakana ny Ivotoro
Ady amin’ny valanaretina Haverina eny amin’ny tobim-pahasalamana ny fitsaboana ny Covid-19
Fepetra ara-toekarena :: Naato ny fandoavana ny ankamaroan’ireo hetra